मनोरंजन Archives »
काठमाण्डौ २, साउन । पछिल्लो समय सामाजिक संजालहरूमा एक एप भाइरल भइरहेको छ । भाइरल भएको ‘फेस एप’ले तन्नेरी अवस्थाका मानिसलाइ उसको भविष्यको अनुहार, हाउँभाउ, लुक्सको हेर्न सक्ने अधिकारी दिएको छ । धेरै नेपाली युवायुवती देखी सेलिब्रेटिहरूले ‘म भविष्यमा कस्तो देखिन्छु’ भन्दै धमाधम तस्विरहरू सेयर गरेका छन् । केही सेलिब्रेटीहरूले बुढेसकालमा यस्तो देखिने भन्दै फोटो सामाजिक संजालमा पोष्ट गरेका छन् भने कोही कलाकारहरूको उनका फ्यानहरूले ‘फेस एप’को प्रयोग गरी तस्विर सार्वजनिक गरिदिएका छन् । निर्माता तथा कलाकार दिपकराज गिरीले बुढो रुप सार्वजनिक गर्दै स्टाटस लेखेका छन्, ‘बिहान बिहान कुन चाहिले…
बाहुबलिका ‘कटप्पा’को गज्जवको लाइफस्टाइल, सुन्दा पर्नुहुन्छ चकित ।
तामिल फिल्मका एक चर्तिच कलाकार हुन सत्यराज । उनलाई उनको नाम सत्यराज भन्दा पनि पछिल्लो समय ‘कटप्पा’ नामले दर्शकले चिन्ने गर्दछन् । ‘कटप्पा’ ‘बाहुबली’ फिल्मका एक चर्चित पात्र थिए । ‘कटप्पा’को भूमिकाले उनलाई चर्चाको शिखरमा पुर्याएदियो । उनले थुप्रै बलिउड फिल्म पनि खेलिसकेका छन् । सन् २०५४ मा भारतको तामिलनाडुमा जन्मिएका उनी तालिम चलचित्रका एक चर्चित पात्र हुन् । उनी ‘बाहुबली’ बाट ठुलो दर्शकघेरामा परिचितभए। उनले दक्षिण भारतका तामिल तेले गु, कन्नड, मलयालम भाषाका १३६ फिल्ममा अभिनय गरिसकेका छन् । ‘बाहुबली’ सत्यराजको नजरमा अभिनेताका हिसाबले एउटा शानदार भूमिका मान्छन्।उनले सरकारकी…
जुमल्याह जस्तै देखीने झरना र सुहाना आमाछोरी (१० तस्विरमा हेर्नुहोस्)
काठमाडौं १७ असार । नव नायिका सुहाना थापा यति बेला परिवार संगै युरोपमा छिन् । चलचित्र ए मेरो हुजुर ३ को विशेष प्रर्दशनलाइ लिएर परिवार नै युरोपमा रहेका छन् । नव नायिका सुहाना र झरना थापाले केही देशमा चलचित्र ए मेरो हजुर ३ को शो सम्पन्न गरेर उनहिरू अहिले जर्मनमा रहेका छन। यसै बिचमा झरना र सुहाना संगै निर्माता सुनिल कुमार थापा पनी जोडिएका छन् । सुहाना सुनिल कुमार र झरनाकी एक्ली छोरी हुन् । बेला बखतमा सुहानाले बाबुआमा संग रमाएका तस्विरहरू सामाजिक संजाल फेसबुक,इन्टाग्राम सेयर गरिरहेकी हुन्छिन् । धेरैले…
अभिनेता दिलिप रायमाझी कि छोरी फिल्म ‘लक्का जवान’मा हिरोइन ?
काठमाडौँ असार, १६ । हास्य कलाकार शिवहरि पौडेल धेरै हास्यटेलिसिरियल निर्देशन गरिसकेका छन् । ‘प्वाक्क मुखमा हान्नु जस्तो’ उनको निकै नै फेमस थेगो हो । उनले अब चलचित्र पनि निर्माण निर्देशन गर्ने भएका छन् । उनको निर्देशनमा बन्न लागेको चलचित्र ‘लक्का जवान’को आइतबार हास्यकलाकार शिवहरि पौडेलले आफ्नो जन्मदिनको दिनको अवसरमा घोषणा गरेका थिए । उक्त चलचित्रका सह-निर्माता भने किरण र अभिनेता दिलीप रायमाझी रहनेछन् ।आमा बङ्गालमुखी फिल्म प्रोडक्सन प्रा.लि.को ब्यानरमा निर्माण हुने ‘लक्का जवान’मा ध्रुव पन्त र अनुसुया श्रेष्ठ पन्तको लगानी रहनेछ ।कलाकार र अन्य प्राविधिक पक्षबारे पछि जानकारी दिने…
काठमाडौँ असार,१६ । नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा केही यस्ता नायिकाहरू पनि छन् जुन नायिकाहरू एकदमै सर्वगुण सम्पन्न रहेका छन् । एउटा राम्रो नायिकामा अभिनय र आवाज सँगसँगै उसको नृत्य पनि राम्रो हुनु जरुरी छ । नेपाली चलचित्रका अधिकांश गीतहरूमा कविराज गहतराजको कोरियो ग्राफ देखिन्छ । लोकप्रिय कोरियोग्राफर कविराजले थुप्रै नायिकाहरू सँग थुप्रै गीतको कोरियो ग्राफ गरिसकेका छन् । तर कविराज चलचित्र क्षेत्रको गतिविधि बाट सन्तुष्ट चैँ छैनन्। आज हामी नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा सबैभन्दा राम्रो नाच्ने १० नायिकाको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ । १०. केकी अधिकारीः केकी अधिकारी नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी निकै चर्चित…
काठमाडौँ असार, १६ । धेरै जसो नेपाली मिडियामा बलिउड/हलिउडमा हुने डिभोर्सका बारेमा धेरै चर्चा हुने गर्दछ । तर पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढे सँगै नेपाली सेलिब्रेटिहरूको डिभोर्सले पनि निकै चर्चा पाउन थालेको छ । उनीहरूको रिल लाइफमा जस्तो सुकै भूमिकामा देखिएपनी रियल लाइफमा जो कोही आफ्नो सम्बन्धबाट टाढिन चाहिरहेको हुँदैन । तर भने जस्तो कसको पो हुन्छ । पछिल्लो समय नेपाली स्रेलिब्रेटीको पनि विवाह भएको केही समयमै डिभोर्सका खबरहरू सुन्नमा आएका हुन्छन् । तर तर, केही जोडी भने उदाहरणीय पनि बनेका छन् । आउनुहोस् हेरौँ डिभोर्सका कारण चर्चामा रहेका…